Kunethiwekhi ye-LAN 192.168.8.100 yi-IP. Abantu abaningi abayitholi indlela yokungena ngemvume ye-intranet wireless router WIFI. Ungazama ukucindezela kusixhumanisi: https://192.168.8.100 ngena ngemvume ku-interface yomlawuli. Uma ungakwazi ukunamathisela, ungabheka ekuhlelweni kokungena ngemvume kwe-router. Uma ukhohlwe amagama akho abasebenzisi namaphasiwedi, mane ubuke ilebula noma ibhukwana le-router.
Ukusetshenziswa kwekheli le-IP 192.168.8.100, ukulisebenzisa kanjani?
Okokuqala, khuphula ubuchwepheshe obabelwe abambalwa bamakheli we-IP. Amakheli e-IP ahlukaniswe ngezinhlobo ezi-5 ze-ABCDE, phakathi kwalokho i-ABC ivame ukusetshenziswa. Phakathi kwezinhlobo ezi-3 zamakheli, ingxenye eyodwa igcinwe amakheli, futhi amaphakethe analawa makheli awakwazi ukusetshenziswa. Isakazeka ngokushesha enetheni, i-IP ikheli eligciniwe kumakheli e-C class, ajwayele ukusetshenziswa kumanethiwekhi we-LAN, imaskhi ezenzakalelayo ye-subnet yekheli le-C class ingu-255.255.255.0, icacisa ukuthi ikheli le-C class lingahlala ama-IP ayi-256 Ngokusobala, kanye nelilodwa omele inethiwekhi, kukhona ngisho nommeleli oyedwa odlulisayo. Kungaqokwa kuphela umsebenzisi angama-254. Isibonelo, i-IP yomsebenzisi yenethiwekhi 192.168.1.0 ingahle isuke ku-1-254. Ukusebenzisana phakathi kwabo akudingi ukuzulazula ku-router. Ngqo amafayela angahanjiswa.
Ukusho, umqondo waleli kheli le-IP usabalele kakhulu. Njengoba kuyikheli eligcinwe, likhombisa ukuthi lingasetshenziswa naku-LAN futhi. Imvamisa, isetshenziswa njenge-IP yomsebenzisi, njengoba i-IP yimantissa ye- .1 imvamisa igcinelwa ukungena, ngakho-ke 192.168.1.2-192.168.1.254 inikezwe umsebenzisi. Uma ku-LAN kukhona iseva ye-DHCP, ungahle usethe iqembu le-IP libe yi-192.168.1.2-192.168.1.254. Lo mbhalo ulungiselela ngokuzenzakalela ikheli le-IP lomsebenzisi.
Okuhlukile ngama-routers angenantambo asetshenziswa kakhulu kulezi zinsuku. Imvamisa, i-IP LAN port yalolu hlobo lwethuluzi ihlala ine-mantissa ye- .1. Kuphakanyiswa ukuthi amaklayenti aguqule imbobo ye-LAN IP iye kwikheli elengeziwe, ukuze amanye amaklayenti angakwazi ukuqagela. Vakashela ama-routers angenantambo we-LAN port IP ngokwesibonelo, i-IP iyindlela enhle. Ngokusobala, i-IP port ye-LAN nayo ingasethwa futhi, asikho isidingo sokukhetha i-IP usebenzisa isigaba sokuqala senethiwekhi. I-IP yezingxenye ezahlukahlukene zenethiwekhi ifihliwe futhi ivikelekile; kodwa-ke, kufanele ukhumbule ukuguqula ukungena komsebenzisi kuye kokuhambisanayo, uma kungenjalo ngeke kwazi ukuxhuma kunethiwekhi.
Ambalwa amafemu amancane noma izikole ikakhulukazi ezicela ukusethwa ngaphandle kwekheli le-IP, futhi ngokulandelayo sebenzisa ukusatshalaliswa kwe-IP ukusebenzisa yonke ifemu noma uhlelo lwesikole ukufinyelela inetha. Ikheli le-IP elisetshenziswa yimishini yalezo zikole noma amabhizinisi yi-IP ye-intranet.
Kumele kushiwo ukuthi ama-PC kwinethiwekhi yangaphakathi angathumela izicelo zokuxhumanisa namanye ama-PC kwinethi, ama-PC ahlukile ku-Intanethi awakwazi ukuthumela izicelo zokuxhumanisa kuma-PC kumanethiwekhi angaphakathi ngenxa yeseva ye-FTP kunethiwekhi yangaphandle.